Eminye imithombo yoLondolozo lweMiphefumlo- ukubala usiya eBukumkani
Udidi Archives: Eminye Imiphefumlo
UMari Loli – Xa isilumkiso siya kufika
Xa iRussia ibhukuqa ilizwe elikhululekileyo kwaye iMisa ayinakubhiyozelwa ngokukhululekileyo…
Usikelelwe u-Elena Aiello-iRashiya iza kuMatshi ngeYurophu
Umhlaba wonke uya kuphazamiseka kakhulu.
ISt. Athanasius - Xa Ungaphandle
Umhlambi omncinci kodwa othembekileyo.
U-Eduardo-Iziprofeto Zam Ziyazaliseka
Uphawu olukhulu eMedjugorje lusondela…
U-Eduardo-Thandaza, abefundisi bakho basengozini
UFr. I-Dolindo-Ukucocwa yiNceba, iyafuneka
Inkanyamba eyoyikekayo kufuneka idlule kwiCawe nakwihlabathi.
Imozulu… nothando lwabaninzi luya kuphola.